Govt to Mull Increasing Number of Lottery Prizes | Myanmar Business Today
Home Business Local Govt to Mull Increasing Number of Lottery Prizes
The government will consider increasing the number of state lottery prizes to award those whose numbers match the K1.5 billion winning ticket even if the alphabets do not match, said U Maung Maung Win, Deputy Minister of Planning, Finance and Industry.
The minister was responding toaquery by U Ko Ko Naing,amember of the Amyotha Hluttaw, about whether the government had plans to add more lottery prizes to increase public interest.
“The Internal Revenue Department and the Ministry’s management committee will look into this matter,” the minister said. He noted, however, that revising or changing lottery prizes can be difficult.
The government pays out 60 percent of lottery ticket sale proceeds in prizes and puts the remaining 40 percent into state coffers.
The minister pointed out that adding more prizes could increase demand for K1,000 tickets.
State lottery tickets are issued in 40 alphabet series, meaning that for every K1.5 billion winning ticket, there are 39 others that bear the same number. If the government sets the prize for the “almost winners” at K150 million each, the total cost will be K5.85 billion, or 10 percent of ticket sale revenue. The government might have to cancel other, smaller prizes to make up for the cost increase from the addition of new prizes, or accept that the total paid out in prizes will exceed 60 percent of sales revenue.
Buyers of K1,000 lottery tickets are entitled to win one of 15 prizes ranging from K1.5 billion to K50,000.
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆုကြီး၏ အက္ခ ရာမတူ၊ ဂဏန်းတူထီလက်မှတ်များကို ဆုငွေ ထည့်သွင်း ချီးမြှင့်နိုင်ရန် သုံးသပ်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၄)ရက်က ကျင်းပပြုလုပ် သော အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၈)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်၏ အောင်ဘာလေဆုမဲများကို ထီကံစမ်းထားသော အများပြည်သူထီပေါက် ခွင့်(ကံထူးခွင့်) အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ပေါ် ပေါက်လာစေရန် လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဆုမဲများမှ ထပ်ဆောင်းဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ၊ မရှိ ဆိုသော မေးခွန်းအပေါ် အထက်ပါအတိုင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ ဆွေးနွေးချက်အ ပေါ်မှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီတို့မှဆွေး နွေးသုံးသပ်မှုများပြုလုပ်သွားမည်”ဟုဒုတိယ ဝန်ကြီးကဆိုသည်။
လက်ရှိ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနမှ ထီ ဆုငွေများချီးမြှင့်ရာတွင် ထီလက်မှတ်ရောင်း ရငွေ၏ ရာခိုင်နှုန်း(၆ဝ)ကိုခွဲဝေချီးမြှင့်ပေး လျက်ရှိပြီး ကျန်(၄ဝ)ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော် ၏ အခွန်ဘဏ္ဍာငွေသို့ပေးသွင်းလျက်ရှိ သည်။
အောင်ဘာဘေထီလုပ်ငန်းသည် ဆုမဲခွဲဝေ မှုပြင်ဆင်သည့်အချိန်တွင် ဝယ်လိုအားမြင့် တက်သော အစဉ်အလာရှိသောကြောင့် လက်ရှိရောင်းချလျက်ရှိသော တစ်ထောင် ကျပ်တန်ထီမှာ ယင်းကဲ့သို့ ဆုမဲပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပါက ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာ နိုင်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
”ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ ဆန္ဒပြုချက်ကောင်း မွန်သော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာနဲ့ ဆုမဲခွဲဝေရာမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးကဆိုသည်။
လက်ရှိ ထီလက်မှတ်များထုတ်ဝေရာတွင် အက္ခရာအလုံး(၄ဝ)ထုတ်ဝေလျက်ရှိပြီး ကျပ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုကြေးနှင့် အက္ခရာ မတူ၊ ဂဏန်းတူလက်မှတ်များမှာ(၃၉)စောင် ရှိမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါဆုကြီး၏(၁ဝ) ရာခိုင်နှုန်း ကျပ်သိန်း(၁၅ဝဝ)စီ ချီးမြှင့်မည် ဆိုပါက သိန်း(၅၈၅ဝဝ)ကျသင့်မည်ဖြစ် သည်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် ကျန်ရှိဆုကြီးများစွာ ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ဆုမဲခွဲဝေပေးသည့် ရောင်းရငွေ၏ (၆ဝ)ရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော် လွန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ဒုတိယဝန် ကြီးကသုံးသပ်သည်။
လက်ရှိ(၁ဝဝဝ)ကျပ်တန်ထီတွင် အမြင့်ဆုံး ဆုမဲအဖြစ် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် နှင့် အနိမ့်ဆုံးဆုမဲအဖြစ် ကျပ်ငါးသောင်းဖြင့် ဆုမဲတန်ဖိုးအမျိုးအစားစုစုပေါင်း(၁၅)မျိုးကို သတ်မှတ်ချီးမြှင့်ပေးလျက် ရှိသည်။
Previous articleAston Martin’s Losses Deepen
Next articleNew Industrial Zone Law Due Soon